नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): यस्तो दु:खद दुर्घटना र क्षत बिक्षत लाश कहिलै देख्नु नपरोस !
यस्तो दु:खद दुर्घटना र क्षत बिक्षत लाश कहिलै देख्नु नपरोस !
बुटवल नगरपालिकाको मिलनचोकमा बन्दै गरेको ६ लेनको सडकमा टिप्परको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार वन कार्यालयका २ जना कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । साथै सो दुर्घटनामा अर्घाखाँची भगवती गाविस र हाल देवीनगर निवासी ४६ वर्षीय नवराज श्रेष्ठको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । अर्का बुटवल चांदबारी निबासी ५० वर्षीय दिलिप न्यौपानेको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । तस्बिर: उमाकान्त पाण्डे